9 billood jir - Somali Kidshealth
04/07/2013 04/07/2013 by admin
Bisha sagaalaad ilmaha jira waxay noqdaan kuwo khabiiro ku noqda guurguurashada. Hadda ilmuhu waa kuwo dhaqaaqaya, hadaaqaya, sahaminaya oo haddana qaxar-raadis ah. Guurguurashada qaar ilmaha ka mid ahi hadda waxay awoodaan inay boombalo hal gacan ku qabsadaan iyagoo si xawli ah ku guurguuranaya oo isticmaalaya labada loow iyo gacanta kale.
Sagaal billood jirku waxay khabiiro ku noqdaan is-rogrogida jirka ee degdega ah sida horay u guurguurashada, dib u fariisiga iyo is-wareejinta. Waxay awoodaan ilmuhu xilligaan inay derbiyada qabsadaan oo iyagoo derbiga cuskanaya ay socodka isku dayaan.
9 Billood jir ciyaaraya
Waalidiin badan baa xilligaan u hanqal taaga inay ilmaha kabo u galiyaan. Xilligaan ilmuhu weli socod ma baran, laakiin waxay isku dayayaan inay bartaan socodka. Waxaa fiican in carruurta aan kabo loo galin inta ay guryaha jooggaan, waayo murqaha iyo seedaha lugaha yaryar ee ilmuhu waxay u baahan yihiin inay bartaan dhulka oo ay qabatimaan. Xilligaan caga-cadaantu waa tan ugu wanaagsan. Isku dayga socodka iyo taagnaantu iyadoo la cagacadyahay waxay dhisaan murqaha lugaha, cagta cad iyo cirbaha. Ilmaha oo cagacadaan lugaha dhulka dhiga waxay kaloo sahashaa in ilmuhu jirkiisa dheeli-tiro marka uu istaagayo.
Carruurta yaryar sannadka ugu horeeya ee noloshooda wuxuu aad muhiim ugu yahay horumarka maskaxda iyo waxbarashada. Malaayiin niyuuroon maskaxeed ayaa samaysmaya oo u baahan in la dhiirigaliyo. Carruurtu waxay u baahan yihiin in loo heeso, la ciyaarsiiyo, la tuso wax ku cusub maskaxdooda oo fikrado ay ka qaadan karaan si maskaxda iyo caqligu u koraan.
Ilmaha 9 billood jirka ah u fududee inay ciyaaraan oo ay ku mashquulaan boombalooyinka. Waxay jecel yihiin dhallaanku inay raseeyaan ama isku rakibaan alaabta lagu ciyaarsiiyo ciyaalka. Xilliga loo qubaynayo waa fursad fiican oo ilmaha la siiyo weelal ama tuubooyin ay biyo ka buuxiyaan kadibna ka daadiyaan. Xilligaan ilmuhu wuxuu u baahan yahay inuu wax baaro oo fiiriyo wax walba waxay ka kooban yihiin iyo siday u shaqaynayaan.
Carruurta da’daan gaartay waxay ku hadaaqayaan erayo badan oo ay adag tahay inaad fahanto. Erayada inta badan laga fahmi karo waxaa ka mid ah “mama” ama “baba”. Xilligaan luuqada ilmuhu waa kortay oo, tusaale ahaan, haddii aad waydiiso “aaway bannoonigaagii?”, wuxuu farta ku fiiqaa jihada bannoonigu yaal.
Bishaan iyo billaha soo socdaba ilmaha waxaa ku soo siyaadaysa Cabsida kala taga ama seperation anxeity oo ah ilmaha oo ooya ama welwela marka waalidkiis sida hooyadiis ay guriga bannaanka uga baxayso. Waxay carruurtu dareemaan cabsi ah wehel la’aan in waalidku uusan soo noqonayn. Waxaa kale oo billahaan soo socda ku soo kordha ilmaha inay qalloodaan oo qof ama dad aysan guriga ku aqoon haddii uu soo kordho inay ka cabsadaan.
Sii ilmaha fursad fiican oo uu ku guurguuran karo, ku istaagi karo ama uu ku xamaaran karo. Inta badan u gogol sagxada guriga/qolka adigoo isha ku haya dhamaan dhaqdhaqaaqa ilmaha .
Bar ilmaha heerka xadaynta oo ah inaad barto ereyga “MAYA”. marka ilmuhu sameeyo ficil khatar ku keeni kara ama uu gaaro meel khatar uga imaan karto ku dheh ereyga “maya”
Qabo labada gacmood ee cunnuga/cunnugta oo bar daadihinta socodka.
Weli waxaad ku jirtaa billaha ugu khatarta badan ee ilmaha dhaqaaqa bilaabay. Hubi gurigaaga inaad ka dhigtay deegaan nabad u ah ilmaha sida ka fogee agagaarka qolka ilmaha dhamaan daawooyinka, sunta iyo wax kasta oo uu liqi karo ilmuhu.
Sidoo kale fiilooyinka iyo gododka korontada waa in amaankooda la sugaa. Tarmuusyada biyaha kulul ku jiraan, feerooyinka kulul iyo alaabta saaran meel uu ilmuhu gaari karo khatar ayaa ka imaan karta.
PrevGogol-qoynta – Isku kaadinta ilmaha
nextGubashada iyo carruurta